Toogashada biraha kaarboon-yarta ah
Gunaanad guul leh 丨 Birta TAA ayaa ka soo qaybgashay Birta 19aad Shiinaha ee Shanghai
Diirada saar carwada Iyada oo wadarta guud ay tahay 120000 oo mitir murabac ah, in ka badan 1300 oo carwooyin caan ah oo ka kala yimid dalal iyo gobollo badan ayaa ka qaybgalay bandhigga saddexda maalmood ah. Marti gaar ah oo qabanqaabiyaha, TAA Metal atten ...
“U dhow macaamiisha, sii wanaajinta” | waa waqtigii aan muujin lahayn tikniyoolajiyadeena dhabta ah
In si firfircoon loo hirgeliyo fikradda aasaasiga ah ee shirkadda "diiradda saaraya macaamiisha" oo si fiican ugu adeegaan macaamiisha, shaqaalaha adeegga ee Waaxda Teknolojiyada injineernimada ayaa dhowaan bilaabay hawlgalka adeegga farsamada ka dib ee iibka ee u dhow macaamiisha, sii wanaajinta ...
Qalabka birta ayaa ah walxaha birta ah ee loo isticmaalo soo saarista qalabka jarista, qalabka cabbiraadda, wasakhaha iyo qalabka u adkeysiga u adkeysta. ...
Qarax toogasho waa geedi socodka caadiga ah ee daaweynta dusha sare ee biraha. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa tuurista, birta, birta shaqada, qaabdhismeedka qaabdhismeedka, qaybaha wax soo saarka birta iyo warshadaha kale.Waxaa lagu hagaajiyaa sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo horumarka firfircoon ee wax soo saarka, waxaan leenahay wax sare ...
Dhowr mabda 'xulasho abrasive hordhac ah
Daxalka birta ayaa meelwalba taagan, marwalba Si looga hortago birta birta, habka ugu caamsan ayaa ah in la isticmaalo daahan si loo ilaaliyo dusha sare ee alaabada birta. Dusha sare waa in la nadiifiyaa kahor ilaalinta kahortaga. Boqolaal wax soo saar iyo warshado ay ka mid yihiin maraakiib, taangiyada keydka, buundooyinka, birta str ...
Qalabka kharashka badan ee mashiinka mashiinka ah ee wax qarxa, hal joogsi hel
Iyagoo wajahaya xaaladda sii kordheysa ee suuqa ee warshadaha kala duwan, shirkaduhu waxay hordhigeen caqabado sare kharashyada wax soo saarka iyo shuruudaha tayada wax soo saarka. Nidaamka toogashada toogashada ee habka wax soo saarku waa xiriir muhiim ah oo saameeya qiimaha alaabada ...
Goynta giraangiraha & giraangiraha
J: Waxyaabaha lagu jaro saxanka: Goynta saxannada waxaa loo qaybin karaa laba nooc: Mashiinka jarista saxanka iyo saxanka jarista dheeman. Waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa jarista alaabada birta caadiga ah, birta birta ah & qalabka aan birta ahayn. Intaa waxaa dheer, sababo la xiriira deegaanka shaqada ...
Soo bandhigista toogashada qarxinta
Qarax toogasho waa magaca habka farsamaynta dusha sare ee farsamada. Nidaamyada la midka ah waxaa ka mid ah ciideynta iyo xoqidda tallaalka. Qarax toogasho ah waa geedi socod daaweyn qabow, oo u qaybsan nadiifinta toogashada toogashada iyo xoojinta toogashada xoojinta.Shot blasting is to remove the sur ...
Lacag-goosi dhexe, Tababar ciidan - Kooxaha iibinta TAA waxay kubilaabanayaan bilow cusub
Tan iyo bilawgii sanadka cusub, kooxda iibinta ee biraha TAA waxay bilaabeen safar cusub oo ah habka "lacag bixinta dhexe + tababarka militariga". Iyada oo ka qayb qaadashada tababarka gudaha iyo carbisyada shirkadda, waxaan helnay aqoon xirfadeed oo aan horumarinnay ...
22 maalmood, wax soo saarka iyo iibku waxay dhaafeen 10000 tan! Bishii ugu horreysay ee sanadka cusub, TAA Metal waxay ku bilaabatay si wanaagsan!
22 maalmood, wax soo saarka iyo iibku waxay dhaafeen 10000 tan! Bishii ugu horreysay ee sanadka cusub, TAA Metal waxay ku bilaabatay si wanaagsan! Bishii Janaayo 2021, TAA Metal waxay soo dhex martay dhibaatooyin badan waxayna si guul leh ku gaadhay natiijada wanaagsan ee wax soo saarka billaha ah ...
Xawaaraha TAA | Si diirran ugu hambalyeynaysaa habsami u hawlgelinta qalabka cusub
Bishii Janaayo 16, EAF kale oo cusub ayaa si rasmi ah looga hawlgeliyey TAA Metal, awoodda dhalaalku waxay kordhin doontaa in ka badan 60000 tan sanadkii. Si loogu adeego macaamiisha bette ...
Xafladda Saxeexa Warqadda Mas'uuliyadda Bartilmaameedka
Ku riixday riyo, ku noolow wakhti qaali ah. Kooxda TAA waxay soo martay sanad aan caadi aheyn oo ah 2020. Bishii Janaayo 4 ee sanadka cusub 2021, shirkadu waxay qabatay xaflada saxiixa ee warqada mas'uuliyadaha sanadlaha ah ee 2021. Munaasabada saxiixa ayuu gudoomiyuhu qorsheeyay oo d ...